Jose Mourinho Oo Qorsheenaya In Kooxda AC Milan Uu Kasoo Qaato Bar-tilmaameedka Kooxaha Real Madrid Iyo Chelsea Ee Leonardo Bonucci – GOOL24.NET
Jose Mourinho Oo Qorsheenaya In Kooxda AC Milan Uu Kasoo Qaato Bar-tilmaameedka Kooxaha Real Madrid Iyo Chelsea Ee Leonardo Bonucci
Macalin reer Portugal iyo kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa doonaya in uu qeyb ka noqdo loolanka loogu jiro saxiixa difaaca qibrada badan ee xulka qaranka talyaaniga iyo kooxda AC Milan Leonardo Bonucci, si uu xili ciyaareedka soo aadan ugu xaliyo dhibaatada ka heysata dhanka difaaca, Bonucci ayaana la filayaa inuu ka tagi doono kooxda Milan xagaaga soo aadan.
Wargeyska “Toto Sport” ee dalka dalyaaniga ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in Jose Mourinho uu isku dayayo inuu ku qanciyo kabtanka kooxda Milan Leonardo Bonucci in uu gacanta ku dhigo saxiixiisa, iyadoo arintan cinwaan looga dhigay boga hore ee wargeyska “Mourinho wuxuu ugu yeearayaa Bonucci imaatinka Manchester United.
Jose Mourinho ayaa la fahansan yahay in kabtanka kooxda Milan ee Leonardo Bonucci uu u arko ciyaaryahanka kaliya ee ka dabooli kara dhibaatada ka heysata dhanka difaaca kooxda Manchester United, saraakiisha United ayaa sidoo kale isku dayaya inay cadaadiska ku saaraan Bonucci inuu noqon doono kabtanka kooxda Red Devils, hadii uu go’aansado inuu yimaado.
Xidigaha Victor Lindelof, Phil Jones iyo Daley Blind ayaa dhamaantood ku dhibtooday Manchester United, halka Eric Bailly uu dhaawac ka soo gaaray. wuxuuna macalinka reer Portugal uusan ku qanacsaneen sida uu yahay xaalka difaaca kooxdiisa wuxuuna qorsheenayaa inuu isbadal xoogan ku sameeyo. xili sidoo kale Chris Smalling uusan fiicneen xili ciyaareedkan waana sababta ku riixeysa Jose inuu raacdo u galo saxiixa Bonucci.
sidoo kale 31 jirkan ayaa waxaa si xoogan u xiiseenayay xagaagi lasoo dhaafay kooxaha ugu awooda badan ee qaarada yurub ee Real Madrid iyo Chelsea oo iyagana dhankooda ka doonayay saxiixiisa.